बेलायतमा कार्यरत डेन्टल नर्सको सुझाव– तपाईंको दाँत कमजोर छ ? मिर्गौला परीक्षण गराइहाल्नुस् - Ratopati
बेलायतमा कार्यरत डेन्टल नर्सको सुझाव– तपाईंको दाँत कमजोर छ ? मिर्गौला परीक्षण गराइहाल्नुस्
जतिसुकै सुन्दर भए पनि दाँत बिग्रेको छ भने मानिस कुरूप देखिन्छ । स्वस्थ दाँत मुस्कानको स्रोत मानिन्छ । सुन्दर मानिसको पहिलो प्राथमिकता दाँत पनि हो ।
त्यसो भए दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने ? डेन्टल सर्जरी अस्पताल बेलायतमा कार्यरत डेन्टल नर्स लीला सेलिङ माबो सुझाउँछिन्, ‘मेटल होइन, इलेक्ट्रिक टुथ ब्रस, ओरब बी ब्रसले दाँत सफा गर्न राम्रो हुन्छ । सम्भव भए दैनिक दुई÷दुई मिनेटका दरले तीनपटक नत्र दुईपटक अनिवार्य दाँत सफा गर्नुपर्छ ।’ खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्न सकिएन भने पानीले मुख कुल्ला गरेर दाँत स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
‘धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ,’ डेन्टल नर्स सेलिङले सुनाइन्, ‘अनिदो बस्नाले गिजा सुनिनुका साथै दाँतलाई असर गर्छ ।’ स्वास्थ्यविज्ञानले कम्तीमा ६/६ महिनामा दाँत परीक्षण गर्नु भनेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सालिन्दा ‘हाइजेनिस्ट’ बाट दाँत सफा गर्नुपर्छ ।
दाँतमा समस्या नआएसम्म परीक्षण नगर्ने नेपालीको बानी छ । पूर्वशिक्षिका समेत रहेकी उनले सतर्क गराइन्, ‘जति नै व्यस्त रहे पनि समय/समयमा दाँत परीक्षण गराउनुहोस् । दाँत रोगी भयो भने खानाको माध्यमबाट रोग बढ्दै जान्छ ।’
चिल्लो र गुलियो खानाले दाँतका रोगी बढ्दै गएका छन् । कारण त्यतिमात्रै होइन । सही तरिकाले सफा नगर्नाले दाँतको समस्या बढेको डेन्टल नर्स लीलाको बुझाइ छ । भन्छिन्, ‘सही तरिकाले दाँत सफा गरे ओरल क्यान्सर र फंगलजस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ ।’
खानेकुराकै कारण केटाकेटीको दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ । केटाकेटीको दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुनुको ६० प्रतिशत कारण जिन र हेरिडिटी र ४० प्रतिशत खानेकुराले भूमिका खेलेको हुन्छ । कतिपयको जन्मदै दाँत पातलो हुन्छ । सम्बन्धित बच्चाको सुरुको विकासक्रममा उचित खाना, क्याल्सियम, भिटामिन डी र मिर्गौलासम्बन्धी समस्याले त्यस्तो हुने गर्छ ।
राम्रो देखाउन सुन लगाउँदा दाँत कमजोर बनाउनुका साथै गिजासमेत रोगी बन्न सक्छ । ‘युरोपका सौखिन बूढाबूढी दाँत फेर्ने रहर गर्छन् । बेलायतमा एक दाँत फेर्न ३३ सय पाउन्ड लाग्छ ? ३२ वटा फेर्न परे १ करोड ५८ लाख ४० हजार लाग्छ । बेलायती सुन्दरता र मुस्कानका लागि धेरै खर्च गर्छन्,’ साहित्यकारसमेत रहेकी लीलाले प्रस्ट्याइन्, रहरैरहरमा दाँत फेर्नु राम्रो होइन । प्राकृतिक दाँतको हेरचाह गर्न अल्छी गर्नुहुँदैन ।’
नेपाली गीत÷संगीतमा दाँतले थुप्रै ठाउँ पाएको छ ।